Ny filoham-pirenen'i Tanzania dia mijoro amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Tanzania Travel and News momba ny fizahan-tany » Ny filoham-pirenen'i Tanzania dia mijoro amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany
Ny filoha Tanzania Samia Suluhu Hassan dia mandray fepetra matotra amin'ny famolavolana endrika indray ny fizahantany amin'ny alàlan'ny paikady marketing mahery setra sy mifaninana amin'ny fananganana vokatra fizahan-tany vaovao.
Nametraka tanjona 5 tapitrisa ny mpitsidika ao anatin'ny 5 taona ho avy.
Ny governemanta Tanzania dia manintona ny fampiasam-bola amin'ny hotely sy fizahan-tany miaraka amina karazana tranonkala fitsidihana fizahan-tany.
Ny firenena dia hamantatra ireo firenena stratejika hivarotra ny fizahantany amin'ny alàlan'ny iraka diplaomatika misy sy ny masoivoho, miaraka amin'ny varotra mahery vaika ny vokatra safariany amin'ny sehatra manerantany.
Rehefa niresaka tamin'ny Antenimiera tao Dodoma renivohitr'i Tanzania vaovao izy, dia nilaza ny filoham-pirenena Tanzania fa misarika mpizahatany maro kokoa ny governemantany ankehitriny amin'ny alàlan'ny tetikady marketing mahery setra amin'ny sehatra manerantany.
Nilaza ny filoham-pirenena fa manantena ny hampiakatra ny isan'ny mpizahatany amin'ny 1.5 tapitrisa ho mpitsidika 5 tapitrisa ankehitriny ny governemanta amin'ny 5 taona ho avy.
Ao anatin'io andalana io ihany dia manantena ny hampiakatra ny vola miditra amin'ny mpizahatany ny governemanta avy amin'ny 2.6 miliara dolara amerikana ankehitriny ka hatramin'ny 6 miliara dolara amin'ny fotoana mitovy, hoy izy.
Mba hahatratrarana ny tanjona kendrena, ny governemanta dia manintona ny fampiasam-bola amin'ny hotely sy fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fanitarana ny toerana fitsidihan'ny mpizahatany, ny ankamaroan'ny toerana manan-tantara sy ny morontsiraka amoron-dranomasina, ankoatry ny tranokala hafa mbola tsy novolavolaina mba hisarika ny mpizahatany.